Uzosingatha eye-2015 AFCON unondweba wodumo | News24
Uzosingatha eye-2015 AFCON unondweba wodumo
Johannesburg – Uzobonakala emidlalweni ye-2015 CAF African Cup of Nations unondweba osezakhele udumo kuleli uVictor Gomes.
Ngokubika kweSoccerLaduma lokhu kuvezwe yinhlangano esingethe ibhola likanobhutshuzwayo kuleli iSouth African African Football Association njengoba iphinde yaveza negama likaZakhele Siwela ongumsizi kanondweba naye ozoba yingxenye yalo mqhudelwano.
Le midlalo yokuqhudelana kwamazwe izoqala ngomhlaka 17 kuJanuwari wonyaka ozayo.
UGomes noSiwela yibona bobabili bakuleli ababiziwe ukuzoba yingxenye yalo mqhudelwano omkhulu ezwenikazi i-Afrika.
OLUNYE UDABA: UMarques ugxibha unompempe uGomes
UGomes uyaziwa njengomunye wonondweba abangezwa mshini futhi abangananazi nokukhipha ikhadi elibomvu noma ukuthatha isinqumo.
Kuzokhumbuleka ukuthi lo nondweba wake wakhomba amaphenathi amahlanu emdlalweni owodwa kanti ngesizini ka-2012/13 waqokwa njengonondweba ovelele kwisizini.
Ngakolunye uhlangothi uSiwela lilokhu likhule njalo igama lakhe ekuphatheni imidlalo emikhulu okubalwa neyokuhlungela indebe yomhlaba phakathi kweMorocco neTanzania ngo-2013.